၃၆၅ ရက်ကုန်ဆုံးရက်ကရှင်းပြသည် - လော်ရာသေဆုံးပြီးနောက်ဘာဆက်ဖြစ်မည်နည်း။ - သတင်း
Netflix အဆုံးသတ်ရက် ၃၆၅ ရက်ကရှင်းပြသည် - Laura ဘာဖြစ်သွားသလဲ။
Netflix on 365 Days သည်ငါတို့လိုအပ်သည်အထိငါတို့လိုအပ်သည်ကိုမသိသောရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကြံစည်မှုပါးလွှာသည်နှင့်သရုပ်ဆောင်သည်ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ဒီရုပ်ရှင်ကကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်အံ့သောငှါဒီတော့သူကပြောတယ်ရွားလှသည်။ ဒါပေမယ့် Netflix ရဲ့ ၃၆၅ ရက်ရဲ့အဆုံးသတ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာအောင်အချိန်ယူကြပါစို့။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုအခြားမည်သူ့ကိုမှရှင်းပြရန်လိုပါသလား?!
Netflix တွင် ၃၆၅ ရက်အတွက်ဖျက်လိုဖျက်ဆီးများပါ ၀ င်သည်။
ဒါကဘယ်ကလဲ။ ဒါကငါတို့အရာတွေကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့ပုံလား။ လော်ရာတကယ်သေခဲ့တာလား?! ဤတွင်အပြည့်အဝရှင်းပြသည် 365 နေ့ရက်များ၏အဆုံးသတ်ရဲ့, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်လာမည့်ဖြစ်ပျက်နိုင်ဘူး။
365 နေ့ရက်များအဆုံးသတ်ကရှင်းပြသည်: လော်ရာသေဆုံးခဲ့သလား
ရုပ်ရှင်၏အဆုံးအားဖြင့်, လော်ရာ Massimo ရဲ့အစီအစဉ်ကိုလှည့်ပတ်လာပြီနှင့်ပြီးသားသူနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်၏နိဂုံးချုပ်မြင်ကွင်းများ Laura ကသူမရဲ့သူငယ်ချင်းကိုသူမကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်းပြောပြပြီးမင်္ဂလာဆောင် ၀ တ်စုံကိုစမ်းကြည့်ဖို့သတို့သမီးဆိုင်သို့သွားသည်ကိုကြည့်သည်။
Massimo ပြန်လာသည့်လမ်းတွင်လော်ရာသို့ဖုန်းဆက်ပြီးမာရီယိုအားတစ်စုံတစ် ဦး ကလော်ရာကိုသတ်တော့မည်ဟုဆိုသည်။ မာရီယိုသည်မက်ဆီမိုသို့ပြေးသွားပြီးသူတို့တွေ့သောအခါမာရီယိုအော်ဟစ်။ ဒူးထောက်လိုက်သည်။ လော်ရာကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းထဲသို့မောင်းနှင်သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ယခုတွင်ရဲကားတစ်စီးစောင့်နေသည်။ လော်ရာလည်းသေသွားပြီလား သူမဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲ
နောက်ဆုံးရိုက်ချက်များကိုရိုက်ကူးပုံကလော်ရာအသတ်ခံရသည်ဟုထင်ရသည်။ ဒါပေမယ့် ရုပ်ရှင်သုံးစာအုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးအပေါ်အခြေခံသည် နှင့်လော်ရာသူတို့အားအတွက်ရှင်သန်။ ဒုတိယစာအုပ်ကလော်ရာသည်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။ လော်ရာကိုဒုတိယနှင့်တတိယနှစ်ခုလုံးတွင်ဖော်ပြထားသည် အကယ် ရုပ်ရှင်စီးရီးများသည်စာအုပ်များကို ဆက်လက်၍ လိုက်နာရန်စီစဉ်ထားပြီးသူမအသက်ရှင်မည်မှာသေချာသည်။
ဒါပေမယ့်ရုပ်ရှင်မှာစာအုပ်တစ်အုပ်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုဆန့်ကျင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လော်ရာမှာအခြားသူတစ် ဦး ဦး ကပြန်ပေးဆွဲခံထားရသောအခြားသီအိုရီများလည်းရှိပါသည်။ Newsweek အရ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၏ဒုတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ကိုကြေငြာထားပြီးဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်အထိမကြေငြာသေးသော 365 Days2သည်ယခုနွေရာသီကိုပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကဲ့သို့သောစစ္စလီကျွန်းများတွင်စတင်ရိုက်ကူးရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လက်ရှိကမ္ဘာ့အခြေအနေကနှောင့်နှေးခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်မျှော်လင့်နိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ကျေးဇူးပြုပြီး Netflix ပေးပါ
365 နေ့ရက်များကိုယခု Netflix တွင်ရရှိနိုင်ပါပြီ။ နောက်ဆုံးပေါ် Netflix ၏သတင်းများ၊ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုများနှင့်မှတ်တမ်းများအတွက် Facebook ပေါ်မှာ Netflix ၏သန့်ရှင်းသောဘုရားကျောင်းလိုပဲ။
• Netflix တွင် ၃၆၅ ရက်ပတ်လုံးဖွင့်လှစ်သောဤ ၃၇ မှတ်သည်ရုပ်ရှင်ကိုယ်တိုင်ထက်ပင် ပို၍ ဆိုးသည်
• '365 Days 'သည် Netflix တွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သမျှအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်း ၂၇ ခုရှိသည်